Ny Fitsarana Tampony dia nifanaiky tamin'ny Governemanta tamin'ny fanenjehana ireo havaozina | Fanavaozana maintso
Ny Fitsarana Tampony dia miombon-kevitra amin'ny Governemanta amin'ny famoahana ny lalàna azo havaozina
Ny Fitsarana Tampony (TS) dia nanohana indray ny fanavaozana ny herinaratra izay naroson'ny PP, ny governemanta izay nampiroborobo ny fanapahana lehibe azo havaozina eto amintsika. Tamin'ny didim-pitsarana tamin'ny 5 septambra, nolavin'ny fitsarana avo ny fampakarana izany Fametrahana fotovoltaika 25 Castilla-La Mancha dia nametraka fitoriana manohitra ny lalàna 2014.
Ny Fitsarana Tampony dia mihevitra fa ny fanovana ara-dalàna dia tsy nandika ny lalàm-panorenan'ny tsy famerenam-bidy na ny azo antoka ara-dalàna, araka ny filazan'ny voakasik'izany, noho izany dia tsy manan-jo hahazo onitra izy ireo.
2 Fitsarana Faratampony
2.1 Vote manokana
Volana vitsivitsy monja taorian'ny fanapahana nataon'ny ICSID, sampan-draharahan'ny Banky Iraisam-pirenena, tamin'ny volana mey lasa teo, ity fanapahan-kevitra ity. Araka ny fantatro Maneho hevitra momba ity pejy web ity aho, nifanaraka tamin'ny volan'ny Eiser ny fitsarana, ary nanome ny baiko ho an'ny fanjakan'i Espana manonitra azy miaraka amin'ny 128 tapitrisa euro (mihoatra ny antsasaky ny 300 nambarany).
Ny ICSID dia nihevitra fa nandika ny satan'ny angovo i Espana tamin'ny alàlan'ny tsy fisian'ny fitsaboana sahaza an'i Eiser. Ity fifanarahana iraisam-pirenena ity, tamin'ny taona 1994, dia mametraka fa tsy maintsy fanjakana mitazona fepetra marin-toerana ho an'ny fampiasam-bola avy amin'ny firenena hafa. Any Espana kosa, dia mbola nifanaraka tamin'ny Governemanta ny fitsarana.
Ny governemanta Mariano Rajoy dia nanamarina ny fanavaozana ny herinaratra tamin'ny filàna maika hampiakarana ny taha-karama. Aorian'ny fanovana mifehy, ireo mpamatsy vola dia nitaona fitarainana. Ireo mpamokatra dia nanam-bola tamin'ny fiantohana ny tombom-barotra azo antoka tamin'ireto fihenam-bidy ireto, manan-kery teo anelanelan'ny 2006 sy 2012. Saingy indrisy, ireo mpampiasa vola vahiny ihany no afaka niditra amin'ny fitsarana iraisam-pirenena.
Betsaka ny fitantanan-draharaham-panjakana no nitory izany tamin'ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana. Ary mpamokatra an'arivony no nanao antso avo tany amin'ny Fitsarana Tampony, amin'ny lalam-pitantanana, ny hevero ho tsy ara-dalàna ny hanovan'ny Governemanta ny fepetra nanomanana ny fampiasam-bolany. Ny lazain'izy ireo dia ny fahasimbana ara-pinoana izay nahatonga azy ireo tsy hampihena ny tombom-bolany, fa ny tsy fahafahany mandoa ireo fotodrafitrasa vita amin'ny trosa.
Amin'ity tranga ity dia nampiakatra ny didim-panjakana tamin'ny 2014 ireo mpamokatra, izay namolavola fitsipika teo aloha tamin'ny 2013, izay mifehy ny famokarana angovo herinaratra avy amin'ireo loharano angovo azo havaozina.
Hatramin'izao, ny Fitsarana Tampony dia nanohana ny fanavaozana ny PP tamin'ny sazy enina farafaharatsiny. Ny lalàm-panorenana ihany koa, izay tamin'ny taona 2015 dia nanapa-kevitra fa ny fanitsiana dia ny vokatry ny toe-javatra sarotra teo amin'ny sehatra iray manontolo sy ny filana hiantohana ny fandanjana ara-toekarena. Amin'ity fehezan-teny farany ity, ao amin'ny fizarana fahatelo amin'ny efitrano ady, dia tadidin'ny mpitsara ny Fanapahan-kevitra momba ny lalàm-panorenana ary izy ireo koa dia mandà tsy handinika ny mari-pankasitrahana ICSID, araka ny nangatahan'ny fiarovan'ny mpamokatra, satria "ny fitoriana ankehitriny dia henjehin'ny lalàna Espaniola sy ny fiarahamonina, raha tsy avy amin'ny fanolorana an-tsitrapo lohahevitra sy Fanjakana sasany ny fitondrana. amin'ny fitondrana arbitration manokana ”.
Ny sazy, izay i José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat no mpitati-baovao, dia manana vato roa. Tamin'ny voalohany, ny mpitsara Eduardo Espín Templado dia nanipika fa tokony ho notazonina ny fampiakarana raharaha noho ny "fihenan'ny lalàna mifanohitra amin'ny lalàna noho ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny fahazoana antoka ara-dalàna sy ny fahatokisana ara-dalàna. Ny faharoa, nataon'i María Isabel Perelló Doménech, dia tena mahery: "Tsy mora ny maka sary an-tsaina ny fanitsakitsahana miharihary ny fitsipiky ny fahazoana antoka ara-dalàna noho izay misy amin'ny fitarihana sehatra ara-toekarena voafehy be tahaka ity iray ity […] handray fanapahan-kevitra lehibe momba ny raharaham-barotra, anisan'izany ny fitohizan'ny fampiharana ny hetsika, raha tsy fantatra ny fitondrana ara-dalàna sy ara-toekarena izay hampiharina amin'izy ireo ”.
Raha ny filazan'ny mpisolovava ny mpamokatra, José Manuel Minaya, dia manome toky fa "ny ankamaroan'ny fametrahana fahefana 100 kW" dia very hatramin'ny 50% amin'ny tombom-barotra ary, amin'ny tranga sasany, miasa tombony 0 na ratsy. Izy io koa dia manome antoka fa "orinasa sasany tsy maintsy hakatona."
Araka ny efa voalaza tetsy aloha tao amin'ny lahatsoratra hafa, ny firenentsika dia mbola manana fanelanelanana 30 eo ho eo misokatra ao amin'ny ICSID, izay misy ny fihenan'ny fihenam-bidy ho an'ny angovo azo havaozina. nampiharina nanomboka tamin'ny 2010. Raha nitovy ny làlan'ny volana mey lasa teo izy ireo dia tsy maintsy miatrika ny fandoavana onitra an-jatony tapitrisa ny fanjakana amin'ny mpampiasa vola vahiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ny Fitsarana Tampony dia miombon-kevitra amin'ny Governemanta amin'ny famoahana ny lalàna azo havaozina
The Powerwall 2, taranaka faharoa amin'ny bateria Tesla
Cerdolí, fandrahonana manafika noho ny fiampitana teo amin'ny kisoa dia sy ny kisoa vietnamiana